Oko sikwenzayo -Shenzhen Sunson International Logistics Co., Ltd.
Sinikezela abathengi bethu ngeyona ndlela intle kwi-eCommerce order ukuze bazalisekise ukusuka e-China ukuya kwihlabathi jikelele…
Ukuzalisekiswa kungaphezulu kokuthumela iiodolo kubathengi bakho. Imalunga nokwenza iklasi yokuqala yamava okuthenga ashiya umbono ongapheliyo, oqinisekisa ukuba abathengi bakho bahlala bebuya be-odola amaxesha ngamaxesha. Kulapho sinokunceda khona!
Amava:Sinamava ngokuseta iinkqubo ezifunekayo ukulungiselela ukuzaliseka kwakho kokugqibela kwizikhokelo ze-B2B kunye neB2C. Siyazazi ezona ndlela zilungileyo kule ntsimi ezinokuba luncedo kuwe. Sineenkqubo ezimiselweyo ezifanelekileyo, izixhobo, kunye nabasebenzi abaqeqeshwe kakuhle ukuba bayiphathe ngokukhuselekileyo, ngokufanelekileyo nangendlela ethembisayo. Izibonelelo zethu zikowona mgangatho uphakamileyo nolondolozo olunokwenzeka rhoqo ngokujonga indawo, ulawulo lomgangatho kunye nokujonga. Abasebenzi bethu baqeqeshwe kakuhle ukuyigcina le migangatho ngalo lonke ixesha.
Inkqubo:Sinikezela ngesisombululo esifikelelekayo nesineendleko zokugcina ukulawulwa kwexesha okusebenzayo engqondweni. Ngokwakha iinkqubo zethu kunye neenkonzo ezijikeleze ishishini lakho, sinokugcina ixesha, imali nayo yonke into iya kuphathwa ngokukhuselekileyo kwaye ingabinasimahla. Inkqubo yethu ngaphakathi iyilelwe abathengi kwaye kulula kwaye inomdla kwivenkile yakho ekwi-intanethi, ekuvumela ukuba ulawule uluhlu lwakho kunye neeodolo ukude. Ungasoloko ubeka iliso kwisitokhwe sakho naphina, nangaliphi na ixesha, ngokukhuselekileyo ngaphandle komngcipheko wokujonga. Isinxibelelanisi esisekwe ngaphambili sewebhu sikaSunson sidityaniswe ngokupheleleyo nomsebenzi wokukhetha nokupakisha. Sisebenzisa itekhnoloji yebhakhowudi kwinqanaba ngalinye.
Ukugcina:Sine-10,000 sq. Yeemitha zokugcina kwindawo e-Shenzhen nase-Guangzhou kwiphondo lase-Guangdong, e-China. Iimveliso zigcinwa ngendlela ecwangcisiweyo. Sisebenzisa ngokufanelekileyo indawo yokugcina indawo yokugcina izinto ukunceda ekusebenziseni ukuphatha. Izinto ezinexabiso eliphezulu zigcinwa zodwa. Indawo yethu yokugcina izinto ikwaxhotyiswe ngeenkqubo zokucinezela umlilo kunye nokujonga iiyure ezingama-24. Sikwanofikelelo olulawulweyo lokuqinisekisa ukhuseleko lweemveliso zakho.
IINDAWO ZOKUGCINA:Indawo yethu yokugcina izinto e-China ikuvumela ukuba uthathe izibonelelo zexabiso eliphantsi lokusebenza kunye neendlela ezininzi zokuhambisa. Kuya kubakho ukubakho kwezibonelelo ezinje ngokuncitshiswa kwerhafu yokuthengisa kunye nokuphepha imisebenzi. Sinokukunceda ukunxibelelana nabathengisi bakho baseTshayina.
Khetha kunye nePakethe:Siphatha ii-odolo ezingama-30,000 + yonke imihla kunye nomthamo wee-100,000 + iiodolo ngexesha lokuphakama kwexesha. Sinexesha lokutshintsha ngokukhawuleza. Ngokubanzi, iiodolo ezingeniswe phakathi kwe-10: 00 - 20: 00 zilungele ukuqokelelwa ngumthumeli ngaphakathi kweeyure ezingama-24. Thina ekukhetheni nasekupakishweni sisebenzisa inkqubo yokuqala yokuphuma, ke abathengi bakho baqinisekisiwe ukuba bazifumana iimveliso zabo zikwimeko efanelekileyo. Sinikezela ngezinto zasimahla zokugcwalisa izinto ukhuseleko olongezelelweyo ngokuchasene nomonakalo ngexesha lokuthunyelwa kwamanye amazwe. Sisebenzisa itekhnoloji yebhakhowudi kwinqanaba ngalinye. Iiphakheji zilinganiswa ngokuzenzekelayo ukuqinisekisa ukuchaneka kweendleko zokuhambisa. Ngapha koko, itekhnoloji yeyona nto iphambili ekunciphiseni iindleko, ekuphuculeni ukusebenza kakuhle kunye nokunciphisa iimpazamo zabantu.
Ukuhambisa ngenqanawe:Iipakeji zihlelwa kusetyenziswa oomatshini bethu kwaye zihlala zijongwa kabini ngaphambi kokuthumela ngaphandle. Ulwazi lwethu lokuthumela ngenqanawa kwamazwe aphesheya lusenza ukuba sikwazi ukugcinela imali kunye nexesha. Uya kuba nelona khetho lokuhambisa uqoqosho lufumanekayo kuba u-sunson ebengamaqabane kunye nabakhweli abahamba phambili be-UPS, i-DHL, i-EMS, njlnjl. , IRoyal Mail, iBelgium Post, njl. Kananjalo sineenkonzo ezinikezelweyo, ezidibanisa nabathumeli baseYurophu ukuba bakhathalele ukuhanjiswa kweemayile zokugqibela. Sebenzisa amaxabiso ethu aphantsi okuhambisa asele sixoxisene naba bathumeli bathembekileyo! Ukuba ungaphandle kwe China kwaye uthengisa iimveliso ze-Made-in-China kwimakethi yehlabathi, emva koko sinokukunceda ngokuthumela ii-odolo ngokuthe ngqo ukusuka e-China kubathengi bakho naphi na kwihlabathi liphela.
Abaxhasi:u-sunson unamava amakhulu ekusebenzeni nabathengi bangaphandle beemveliso zabo ezivela e-China. Njengoko sisazi, uninzi lwabathengisi abakwi-Intanethi basekwe ngaphandle; siphuhlise imodeli yeshishini eyahlukileyo ehlala bonke abathengi bethu ekude kwaye ibavumela ukuba balawule yonke into kwi-intanethi. Ukuba ufuna ukuzalisekiswa okudibanisa ngaphandle komthungo kunye nenqwelomoya yakho yokuthenga nge-e, kwaye emva koko sinokuxoxa kunye nawe ukulungisa le nkqubo ngokudityaniswa kwe-API. Siza kwenza kube lula ukuqhuba indawo yokugcina izinto e-China ivela phesheya kolwandle.
Inkxaso:Sinabaphathi beAkhawunti abathetha isiNgesi; Abameli beenkonzo zabaThengi abahlala banikezelwa kumthengi ngamnye obhalisiweyo ukuba banike inkxaso efanelekileyo.
Iinkonzo zokufezekisa oza kube ulawula apha, sunson uyaphendula kwaye uzibonakalisile kuzo zonke izibophelelo zethu. Ungaliphelisa ixesha olichithe ekuqeshweni kweenkqubo, uqeqesho kunye nokubeka iliso kubasebenzi bokuhambisa ukuba unxibelelana nathi. Ukwenza ngokwakho akulula, silapha kuwe. Sikwenzela yona, ngokukhuselekileyo nangokuhambelana nexesha. Amaxhala akho akude. Iziko lethu lokufezekisa yile nto uyifunayo ukuze ufikise ishishini lakho kwinqanaba elilandelayo, elithembisayo kwihlabathi liphela.
Siyakukhuthaza ukuba uqhube ukuthengisa kwaye siya kukuphatha ukupakisha, ukuthunyelwa kwakho. Ujolise nje kule nto uyenza kakuhle. Iinkonzo zokufezekisa oya kuzifumana ku-sunson zikhuselekile, ziyaphendula kwaye zibonakaliswe kakuhle. Uya kuliphelisa ixesha elichithwe ekuqeshweni, kuqeqesho nasekujongeni abasebenzi bokuhambisa okanye ukuzenza ngokwakho kunzima kakhulu. Iziko lethu lokufezekisa yile nto uyifunayo ukuze ufumane ishishini lakho kwinqanaba elilandelayo.